I-Wyze Watch Pre Order - Ungawuthenga Kanjani Umhlahlandlela? - Amagajethi
Iwyze watch isizophuma nje ngoFebhuwari 2021 futhi izokwenzeka ngonyaka ozayo. I-Wyze ibilokhu yenza uphawu njengomunye wabakhiqizi bezixhobo ezihamba phambili zasekhaya kusukela umkhiqizo wokuqala uphuma eqhugwaneni.Ngokuthengiswa okuphumelelayo kweqembu le-Wyze, abakhiqizi bakulungele ukwethula iwashi le-Wyze njengomkhiqizo omusha.
Kakade sekudala isiyaluyalu phakathi kwababhlogi be-tech savvy nabathanda ngenxa yezici ezinhle nokucaciswa.Akuwona lo mkhiqizo kuphela obukeka umangalisa, kodwa usuphenduke oncintisana nabo bobabili iwashi leGoogle Fit ne-Apple, futhi uqagela ukuthi kuzokubiza malini u- $ 20 kuphela ukuthenga lo mkhiqizo futhi kufanele uthenge lo mkhiqizo.
INintendo Shintsha 2 - Usuku Lokukhishwa Nokuvuza
Kuyini iWyze Watch?
Uma usuvele uhlangabezane nebhendi ye-Wyze, lo mkhiqizo omangalisayo ulapha ukukuthakazelisa futhi. Iwashi le-Wyze lenzelwe ukukunikeza isisombululo esiphelele ekulandeleni imfanelo yomzimba kanye nokufuna imininingwane kanye nezinye izinsizakalo eziningi.
Nakanjani uzothandana noWyze futhi sekuyisikhathi soku-oda ngaphambili manje! Iwashi le-Wyze liza nepulatifomu ehlanganisiwe efaka i-Apple Health kanye neGoogle fit. Ngokuhambisana nalokhu, impilo yebhethri emangalisayo nomqondo ohlakaniphile konke ongathanda ukuba nakho.
Uma uzibuza ukuthi ungayi-oda kanjani ngaphambili iwashi le-Wyze, lo mhlahlandlela uyikho konke okufunayo. Ngakho-ke ngaphandle kokulibala, ake siqale kulokhu.
Imininingwane ye-Wyze Watch Complete:
44 mm Buka
Khombisa I-1.75 TFT LCD I-1.4 TFT LCD
Isixazululo 320 x 385 320 x 320
Isisindo 46.5 g 40 g
Impilo yebhethri Izinsuku eziyi-9 Izinsuku eziyi-9
Amandla webhethri 300 mah 250 mAh
Isikhathi sokushaja 2.5 Ihora 2.5 Ihora
Isilinganiso IP68 IP68
I-MCU 96 MHz 250 MHz
I-RAM 512 KB 8 MB
I-Bluetooth 5.0 5.0
Ingabe i-WYZE iphephile ukusebenzisa?
Iwashi le-Wyze liza nomzimba omangalisayo futhi liyakha. Kuzo zonke izinhlangothi, kuvikelwe ukuvimbela umswakama futhi zonke izinzwa zisebenza ngokunembile. Ngokuza kwezokuphepha, ake sixoxe ngezinto eziningi okungenzeka ukuthi ziqhubeka.
Imichilo ayihambelani kahle ekilasini uma kukhulunywa ngokukhiqiza. Kodwa-ke, ziyakhanga futhi zakhiwe ukuze zihlale isikhathi eside. Ngaphandle kwalokho, ungathola imibala eminingi ongakhetha kuyo.
Iza ne-IP68 yokulinganisa amanzi. Leli yizinga lamadivayisi amaningi we-elekthronikhi uma kukhulunywa ngokungenwa ngamanzi emvelweni.
Umzimba wonke uhloniphekile nge-aluminium casing kuzo zonke izinhlangothi. Ivimbela lo mkhiqizo ukuthi wehle uma iwashi lakho le-Wyze lingawi nje.
Ngilisetha kanjani iwashi lami le-WYZE?
Iwyze watch neWyze band zenziwa kuzingxenyekazi ezifanayo. Ungalindela ukuthi bobabili babe nezinqubo ezifanayo zokuqondisa kanye nemihlahlandlela. Nazi izinyathelo ezimbalwa ongazilandela ukusetha iwashi le-Wyze.
Landa uhlelo lokusebenza lwe-Wyze efonini yakho bese ulifaka. Uma isiqedile, chofoza ku-Faka idivayisi. Lapha, uzobona iwashi le-Wyze. Mane uthephe kulokhu.
Manje kuzodingeka ube namandla kwiwashi lakho le-Wyze. Ukuze wenze lokhu, xhuma leli washi neshaja yakho bese ucindezela inkinobho yamandla. Izovuleka ngokuzenzakalela. Linda iqembu lakho ukuthi laziwe.
Ngemuva kwalokhu, uhlelo luzokucela ukuthi ubhangqe iwashi lakho le-Wyze. Uzobona iphini enamadijithi amane ekhombisa esikrinini sakho sokubuka. Thepha kulesi sikrini futhi ngokushesha uhlelo lwakho lokusebenza lweselula luzokhombisa iphasiwedi efanayo enamadijithi angu-4.
Thepha kudivayisi yakho yeselula bese kuzoqala inqubo yokumatanisa. Lokhu kungathatha isikhathi esithile kuhlelo lokusebenza. Udinga ukulinda isikhashana. Uma iqala ukubonisa njenge- 'Qinisekisa', shiya izandla zakho kuzo zombili lezi zinsiza. Iwashi lakho le-Wyze manje selisethelwe ukusetshenziswa ngokuphelele.
Izici ze-Wyze Watch:
1. Isikrini sokuthinta
Usayizi uhlala edlala indima enkulu uma kukhulunywa ngokusebenzisa iwashi elihlakaniphile. Ukuba nesibonisi esinethezekile esinamafonti anesibindi ngaso sonke isikhathi kwenza kube lula kuwe ukuthi uhlole amamenyu nezilungiselelo ngazinye. Abakhiqizi bakwenze kwacaca ukwenziwa kwale divayisi emangalisayo. Amawashi e-Wyze angena ngamamodeli amabili ahlukene. Enye yazo inesikrini esingu-1.75-inch kanti enye iza ne-1.4-inch touch screen display. Ungathola izibonisi ezinqenqemeni ukuya emaphethelweni wazo zombili.
2. I-oksijeni yegazi
Amazinga e-oxygen egazini enza umthelela omkhulu empilweni yethu yansuku zonke egijima. Ukungalingani okuncane emazingeni e-oksijeni egazi kungadala nezinkinga ezinkulu. Ngosizo lwalesi sici, ungalindela uhlelo oluqhubekayo lokuqapha umoya-mpilo olungu-24 x 7. Ngokuqapha okuqhubekayo, le divayisi ikuvumela ukuthi uthole imiphumela enembile futhi ikuthumela izexwayiso kuzinhlelo zakho zokusebenza noma kunini lapho kunokushintshashintsha kwamazinga e-oxygen.
3. Umzimba Onesitayela
Isici esisodwa esenza lo mkhiqizo umangalisa ukwakhiwa nokwakhiwa okuhle. Iza nayo yonke insimbi yensimbi okujabulisa ukuyibuka nayo. Ukuze uthuthukise ukubukeka, kufaka phakathi induduzo engasindi okwenza lo mkhiqizo ube mangalisa ngokwemvelo. Ifika kudizayini yensimbi ekuvumela ukuthi uphathe le smartwatch ngaphandle. Uhlaka lwe-6061 aluminium alloy luyenza ikhetheke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ungenza ngezifiso amabhande nezintambo.
4. Ukumelana Namanzi
Ukumelana kwamanzi sekuyinto ebalulekile kuwo wonke amawashi ahlakaniphile. Kuhlonipheke ngokwanele ukunikeza ukuxhaswa ezinketho zokumelana namanzi. Lo mkhiqizo ungabamba ukumelana kuze kufike kumamitha amabili ngaphansi kwamanzi. Isikhathi esinqunyelwe isici sokumelana namanzi cishe imizuzu engama-30. Impela, ukubhukuda naleli bhendi akusoze kwaba yinkinga kuwe nhlobo.
5. Ukushaya kwenhliziyo
Ayikho i-tracker yomsebenzi engasiza uma ungenayo inzwa yokulandelela yokushaya kwenhliziyo kuyo. Ngokujabulisayo, le divayisi iza neyodwa futhi kuyamangaza ukusebenzisa nayo njalo. I-tracker yokushaya kwenhliziyo yewashi le-Wyze iyamangalisa futhi ihlala isebenza. Ukuqapha imiphumela yokushaya kwenhliziyo yakho, ungavula kalula uhlelo lokusebenza lwe-Wyze bese ulibuka. Ngokufana nokulandela ngomkhondo kwenhliziyo, ungathola futhi izici ezinjengezinyathelo nokuqapha ukulala. Zonke zibonakala zibalulekile.
6. Impilo yebhethri
Enye into ebalulekile noma ubani angathanda ukuba nayo impilo yebhethri emangalisayo. Uma kukhulunywa ngokubuka kwe-Wyze, kuhamba phambili kunamanye ama-smartwatches amaningi atholakala emakethe namuhla. Impela, noma ngubani angathanda ukusebenzisa lo mkhiqizo njengoba unikeza cishe izinsuku eziyi-9 zempilo yebhethri. Inikwe amandla ibhethri le-300 mAh elihlala isikhathi eside kakhulu kunabanye. Ngaphezu kwalokho, isikhathi sokushaja saleli bhethri naso sincane futhi cishe amahora angama-2.5.
Ubuhle nobubi beWyze Watch:
Iyahambisana kokubili i-Alexa ne-Google
Isebenza kalula ngeGoogle Fit ne-Apple Health
Ukwenziwa komzimba kuyikhwalithi emangalisayo
Iza nokuboniswa kwesikrini sokuthinta
Ungathola isilinganiso se-IP68 Samanzi
Ibhethrikuyamangaza ngokuxhaswa kwezinsuku eziyi-9
Imichilo ayihambisani kahle nekhwalithi
Ungayi-oda kanjani ngaphambili i-Wyze Watch?
Manje njengoba uzimisele ukuthenga iwashi elisha le-Wyze, ungavele ulandele lezi zinyathelo ezingezansi. Okwamanje, leli washi alikatholakali kumasayithi amaningi we-E-Commerce. Kuzofanele uye ekhasini elisemthethweni le-Wyze uku-oda.
Vula isiphequluli sakho bese uya kuwebhusayithi esemthethweni ye-Wyze. Ungasesha iwashi le-Wyze kusuka lapha. Uma ungakwazi ukuthola lokhu, mane Chofoza lapha .
Uzoba nezinketho ongakhetha kuzo kumawashi amabili e-Wyze ahlukene nosayizi ohlukile besikrini njengoba kutholakala. Kungaba yi-47 mm noma i-44 mm. Cindezela inkinobho yomsakazo eceleni kwaso bese ukhetha ibhendi yombala. Noma kunjalo, lokhu kungakhethwa. Uma usuqedile, khetha ithebhu yoku-oda ngaphambilini ekhona lapha.
Iwashi lakho elisha lingeziwe enqoleni yakho yokuthenga. Chofoza kusixhumanisi senqola yokuthenga futhi sizovula ithebhu entsha. Bheka ithebhu yesandla sokudla bese ukhetha Izwe lakho. Faka ikhodi yezwe neyeposi. Uma unamakhodi wephromo, wasebenzise, ​​bese uqhubeka ukhokha.
Manje usungafaka imininingwane yakho siqu kufaka phakathi ikheli lakho lokukhokha nokunye. Faka imininingwane yekhadi lakho bese uqinisekisa inkokhelo yakho. Uma usuqedile, uzothola i-imeyili yokuqinisekisa evela ku-Wyze mayelana ne-oda lakho langaphambilini. Izofika ekhaya lakho ngemuva kukaFebhuwari 2021.
I-Wyze Watch vs Apple Watch vs Samsung Watch Ukuqhathanisa:
Ngabe iWyze ingcono kuneWyze Band?
Iwashi le-Wyze lingumkhiqizo omangalisayo ongawusebenzisa lapho ungathanda ukuba nawo ukuze uwasebenzise njalo. Vele, kunomehluko phakathi kwe-smart band ne-smartwatch. Kunezici eziningi ezikhona kuwashi le-Wyze njengezaziso, ukulawula okuphelele kwasekhaya, nezinye ongeke uzithole kunoma yiliphi iqembu le-smart. Noma intengo yokwethulwa kwewashi le-Wyze incane kakhulu, kungumkhiqizo omuhle onawo wokulandela ngomkhondo umsebenzi wakho nokusetshenziswa kwansuku zonke.
Ingabe Kufanele Uthenge iWyze Watch?
Iwashi le-Wyze liveza cishe zonke izici okade ubheke ukuba nazo kunoma iyiphi i-smartwatch. Ngezici ezifana nokulandelwa komsebenzi kanye nokulandelwa kwenhliziyo, kuyithuluzi elihle onalo nganoma yiliphi ikhaya.
Uma ubheka intengo njengento ebalulekile, iwashi le-Wyze likubiza ngaphansi kwe-Samsung smartwatch noma i-Apple Watch. Ngaphezu kwalokho, izici ozithola njengokulawula okuphelele kwasekhaya ziyamangalisa ngempela futhi zenziwa nokufanisa. Kutholakala ikakhulukazi ngosayizi ababili abahlukene futhi ukucosha noma iyiphi yazo kungaba yisinqumo esihle ongaba naso.
Ngokubona kwami, iwashi le-Wyze ukuthengwa okuhlakaniphile kwabantu abafuna izixazululo ezilungele isabelomali futhi bathole ukufinyelela okuphelele.
Iwashi le-Wyze ngumkhiqizo omangalisayo okufanele ube nawo. Kunezici eziningi nge-Wyze ongeke uzilahle. Ukubuyekezwa kokuqala kokubuka okuvela kubantu abashisekayo kuphakamisa ukuthi iwashi le-Wyze lizoqhudelana ngqo kuwo womabili ama-smartwatch we-Apple ne-Samsung. Noma kunjalo, lo mkhiqizo unenzuzo emangalisayo yokuthola inani eliphansi. Izici zayo yonke le mikhiqizo emithathu ziyafana kuphela kukhona ezinye izici ezingeziwe ongazisula ngempela.
Ngokwami, ngingathanda uku-oda i-Wyze khona manjalo. Kungani ulinda eminye le divayisi lapho ungaya ngokushesha kuwebhusayithi esemthethweni bese u-oda ngaphambili manje? Shesha ngaphambi kokuvalwa kwesitoko se-oda langaphambilini.
ibhayisikobho yamahhala ongayibuka
ungayibuka kanjani i-hotstar mahhala
amawebhusayithi ukuthola amakhadi wesipho se-amazon
iwebhusayithi enama-movie wamahhala